Mpanamboatra fandriana hopitaly miasa tsara indrindra sy orinasa | Webian
Fandriana hopitaly miasa iray
Ny fandriana fitsaboana tokana no safidy voalohany amin'ny toekarena. Mandritra ny fitsaboana isan'andro sy ny fitaizana be antitra, ny ampahany any aoriana dia azo ahitsy arakaraky ny filan'ny marary sy ny fikolokoloana, ny zoro azo ovaina dia ambany noho ny 75 °. Afaka mipetraka mihinana sy mamaky ny marary.
Momba ny fandriana mampiasa fitaovana. Ity fandriana ity dia mampiasa headboard ABS azo esorina; mpiambina firaka alimika dimy bar. Milamina sy mafy orina ary miaraka amin'ny fitaovana fiarovana. Azo aforitra sy fisaka amin'ny haavon'ny fandriana izy io. Ny casters misy frein dia mora mihetsika ary tsy misy tabataba, manome ny marary tontolo milamina sy milamina izy io. Ny endrika sy ny faritra azo namboarina sy tsy voatery arakaraka ny takiana. Azonao atao ny misafidy ny famolavolana mifanaraka amin'ny fomba malaza eo amin'ny tsenanao eo an-toerana.
Fandriana hopitaly crank manual iray
Takelaka fandriana ABS azo esorina
Firaka aliminioma sy fiarovana vy
Takelaka vy lehibe manara-penitra manify L1950mm x W900mm
125mm mangina miaraka amina casteur frein,
Max lanja lanja
Kidoro, tsato-kazo IV, farango kitapon-drano, latabatra fisakafoanana
Boky torolàlana momba ny fandriana hopitaly
Fandriana hopitaly hiasa iray
toy ny marika
5. tontonana am-pandriana
6. Crank amin'ny fampiakarana miverina
7. Mekanisme famolahana
10. Fitaovana lavaka fidiovana
11. Crank ho an'ny lavaka fidiovana
12. lavaka fidiovana
1. Solaoro sy solaitrabe amin'ny farafara ABS toy ny sary 1
Atsofohy amin'ny alàlan'ny farafara ny zoron'ny lohan-doha sy ny takelaka ary afatory amin'ny vodi-takelaka sy ny takelaka
2. Fijoroana IV: ampidiro ao amin'ilay lavaka voatokana ny fijoroana IV.
3. latabatra fisakafoanana ABS: Apetaho eo amin'ny arofanina ny latabatra ary fehezo tsara izy.
4. Fiambenana aliminioma na vy tsy misy fangarony: amboary amin'ny vodi-paosy ny arofanina amin'ny alàlan'ny lavaky ny tranom-baravarana sy ny fandriana.
1. Fitrandrahana fialan-tsasatra aoriana: Ahodino ny crank amin'ny famantaranandro, ny fiakarana amin'ny tontonana aoriana
Ahodino ny crank mifanohitra amin'ny famantaranandro, midina ny tontonana aoriana.
2. Lavaky ny kabine: esory ny plug, sokafana ny lavaka fidiovana; atosiho ny varavarana fidiovana, avy eo ampidiro ny plug, mikatona ny lavaka fidiovana.
Ny lavaka fidiovana miaraka amin'ny fitaovana crank, ahodino ny crank amin'ny famantaranandro hanokafana ny lavaka fidiovana, ahodino ny crank mifanohitra amin'ny famantaranandro hanidiana ny lavaka fidiovana
2. Ny entana azo antoka dia 120kg, ny lanjan'ny enta-mavesatra dia 250kgs.
3. Aorian'ny fametrahana ny fandriana hopitaly dia apetraho amin'ny tany izany ary zahao raha mihozongozona ny vatan'ny fandriana.
4. Ny rohy fiara dia tokony hosorana tsy tapaka.
5. Zahao tsy tapaka ny casters. Raha tsy tery izy ireo dia afatory indray izy ireo.
Teo aloha: Boky fandriana hopitaly miasa telo
Manaraka: Fandriana hopitaly miasa roa
Fandriana hopitaly cranks 2
Fandriana Manual ao amin'ny hopitaly
Fandriana Manual Icu
Fandriana marary amin'ny tanana
Boky Torolàlana ho an'ny marary
Boky fandriana hopitaly miasa telo
Hopitaly fanaka hopitaly hopitaly plastika hopitaly ...